Ukuphakamisa iimagnethi - China Ningbo Sine
Imigaqo Model PML ezisisigxina Magnet ophakamisa na indlela magnetic eziveliswa NdFeB izinto ngemagnethi olomeleleyo. Nangaphandle of indlela otsalayo kulawulwa ngokuvula isiphatho manual PML lifters esisigxina ngemagnethi abe umazibuthe njengoko igunya, namandla alo nokuphakamisa soze buthathaka.
Xa kulayishwa kunye nokothula, Ngumphakamisi nga ukuphakamisa intsimbi / iibhloko yentsimbi, iisilinda kunye nabanye kwi izinto ngozibuthe ukuba nothungelwano lonxibelelwano. Kuyinto elula kakhulu ukuba isicelo iyalayisha, ukothula, kunye ehambayo. PML lifters isigxina ngemagnethi zezona ndawo kakhulu efanelekileyo ukunyusa ngenxa mveliso, amachweba, izitora kunye nokuthuthwa.
Olova emangalisayo yakhiwe, kulula ukuba isicelo, womelele ngamandla Umtsalane Imagnethi yomhlaba kunye ekhuselekileyo ekuphatheni.
Vula kunye Umxokozelo imveliso ikhathalogu yeencwadi ophakamisa magnetic
Okulandelayo: Pot ngumazibuthe